संक्रमित ज्यान लिएर वीरमा ‘वीरता’ देखाइरहेका डा. थापा र मेहता – Health Post Nepal
२०७८ माघ ४ गते १५:४५
काठमाडौं – विश्वका अधिकांश देशमा कोरोना संक्रमणले ‘सुनामी’को रुप धारण गरिसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारमा बढेको कोरोना संक्रमणपछि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन।
नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। यसले कोरनाको तेस्रो लहर ल्याएको भान गराइरहेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य संकट बढ्दै गइरहेको छ। सरकारको फितलो तयारी तथा कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका कारण अधिकांशमा फेरि पूरानै लहरका यादहरु आइरहेका छन्। जसले नागरिकमा भय उत्पन्न गराइरहेको छ।
केही दिनअघि अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो र चिन्ताजनक थियो। जसमा अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरुमा बेडको र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन थालेको यथार्थ सामुन्ने आएको थियो। केन्टकी, अल्बामा, इन्डियाना र न्यु ह्याम्पशायरको अवस्था त झनै बिकराल भएको उल्लेख गरिएको थियो।
नेपालमा पनि कोरोना र यसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका बढ्दो केसहरूले यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौति थपेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुनथाले पछि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी हेर्न पनि समस्या हुन थालेको छ। कर्मचारी अभावले बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
संक्रमणको बढ्दो दायराका कारण अहिले अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। बढ्दो कोरोना केसका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश अस्पतालमा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलिएको छ। कोभिड युनिफाइड अस्पताल वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पताल जस्ता प्रमुख अस्पतालमै अधिकांश चिकित्सक संक्रमित भएका छन्।
अभावकै बीच अस्पतालहरुले सेवा दिइरहेका छन्। यतिसम्मकी संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी नै उपचारमा खटिन बाध्य भएका छन्। संक्रमित भएकाहरु बेडमा छटपटाइरहँदा उनीहरु आफ्नो स्वास्थ्य तथा कठिनाइलाई बेवास्ता गर्दै रातदिन संक्रमितको सेवामा खटिइरहेका छन्।
डा. श्यामनारायण मेहता र डा. सन्दीप थापा पनि यसकै एक उदाहरण हुन्। उनीहरु आफू संक्रमित भए पनि बिरामीको सेवामा लगातार पीडाको परवाह नगरी खटिएका हुन्छन्। वीरमा आएका बिरामी नै उनीहरुका प्रेरणाका स्रोत हुन्। बिरामीको मुहारमा उपचारपछि देखिने खुसीले मेहता र थापालाई आत्मसन्तुष्टि र आत्मबल दिन्छ। सेवा गर्न पाउँदा कोरोनाले गलाएको शरीरमा उर्जा थपिदिन्छ।
आफू संक्रमित भए पनि बिरामीको छेउमा पुग्दा ‘सेटिस्फाइड फिल हुन्छ’
संक्रमित डा. मेहता र थापा अस्पतालमा बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिएका हुन्छन्। आफ्नो संक्रमित ज्यानको परवाह उनीहरुलाई छैन। ज्यान दुख्छ तर त्यो दुखाई बिरामीको छेउ पुग्दा हराएर जान्छ। बिरामीको मुस्कान पीडा मेटाउने औषधि बनिदिन्छ।
‘म यो फिल्डमा आएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मनमा हुन्छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा मेरो उपस्थिति नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ। बिरामीलाई गाह्रो भएको बेला उनीहरुको छेउमा पुग्दा मनदेखि नै सेटिस्फाइड फिल हुन्छ।’, डा. थापाले भने।
बिरामी पोजेटिभ भएर आउँदा अस्पताल र डाक्टरप्रतिको आशा बढी हुने हुनाले त्यो ‘होप’ लाई आफूहरुले मर्न नदिनु नै ठूलो भएको डा. थापा मान्छन्। ‘प्यासेन्टको होप बढी हुन्छ। उनीहरु सामान्य लक्षण देखिँदा पनि आत्तिने हुन्छन्। हामी त चिकित्सक हौं, धेरै कुरा बुझेका हुन्छौं। त्यसैले पनि बिरामीको त्यो होपलाई मर्न दिनुहुँदैन।’, उनले भने।
डा. मेहता पनि संक्रमित भएको धेरै भएको छैन। उनले आइतबार परीक्षण गराउँदा नतिजा पोजेटिभ आयो। सुरुमा निकै गाह्रो भएको उनले बताए।
‘मलाई बिहीबार रातिदेखि गाह्रो भयो। फिभर आयो। शुक्रबार एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ आयो। तर, जिउ निकै गलेकाले त्यो दिन पिसिआर गराउन सकिनँ। शुक्रबार ज्वरो १०४–५ डिग्री पूग्यो, घाँटी, जिउ निकै दुख्यो, जाडो भयो, लो ब्याक पेन भयो। शनिबार रातिसम्म धेरै गाह्रो भयो। सास फेर्नै गाह्रो भएजस्तो भयो, घोप्टो सुते। २ घण्टा निकै गाह्रो भएको थियो। औषधि खाएँ। आइतबार पनि ज्वरो आयो। पहिलेजस्तो कडा भने होइन। त्यसै दिन पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गराएँ। नतिजा पोजिटिभ आयो।’, उनले भने।
आफूलाई गाह्रो भए पनि बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा निकै सन्तुष्ट हुन्छन् डा. मेहता। ‘घरमै बसिरहन मन लागेन। काममा फर्किन र बिरामीको सेवा गर्न मन लाग्यो। सेवाप्रतिको भावले मलाई संक्रमित अवस्थामा पनि यहाँ ल्यायो। अहिले पनि अलिअलि गाह्रो हुन्छ तर बिरामीको सेवा ठूलो हो मेरो लागि।’, उनले भने।
डा. मेहताले पहिलेजस्तो एकप्रकार डर अहिले आफूमा नरहेको बताए। उनले बिरामीमा पनि त्यस्तो प्रकारको जटिल समस्या नभएको बताए। ‘पहिले भ्याक्सिनेटेड नभएकोले मलाई पनि सुरुसुरुमा डर लाग्थ्यो। तर, अहिले धैरै फरक छ। सिरियस हुने लक्षण देखिएको छैन। अधिकांश संक्रमित भ्याक्सिनेटेड भएर पनि इम्युनिटी बुस्ट भएको छ।’, उनले भने।
डा. थापा बिरामीको सेवा नै आफ्नो ठूलो धर्म ठान्छन्। ‘हामीले उपचार नै गर्ने हो। यो हाम्रो धर्म हो। हामी नै बिदा बसे कसले गर्छ। अझ वीरमा त देशभरिबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरु आउनुहुन्छ ठूलो आशा बोकेर। हामीले त्यसलाई मर्न दिनुहुँदैन।’, उनी भन्छन्।
अहिले कोरोना संक्रमितका गम्भीर अवस्था नदेखिँदा उनी खुसी छन् तर फैलिँदै गएको संक्रमणले फेरि पछि जटिल अवस्था ल्याउने पो हो कि भन्ने कुरामा उनी चिन्तित पनि छन्।
‘अहिले एक्कासी धेरै इन्फेक्टेड हुनुभएको छ। संक्रमण पिकमा गएको छ। तर, खुसीको कुरा पहिलेजस्तो गम्भीर अवस्था धेरैमा देखिएको छैन। पहिले आउनेवित्तिकै अक्सिजन चाहिने हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन। लक्षणहरु सामान्य नै छन्। तर, यसरी नै संक्रमण बढ्दै गए पछि संकट आइपर्ने हो कि भन्ने डर छ।’, उनले भने।
उनले दीर्घरोगीलाई भने केही गाह्रो भएको र अक्सिजन आवश्यक भएको बताए।
डा. मेहता र थापाको यो सेवाभावले अन्य चिकित्सकलाई पनि उर्जा दिएको छ। सहकर्मी तथा बिरामीले उनीहरुको प्रशंसा गरिरहेका छन्। उनीहरुले अस्पताल प्रशासन र सहकर्मीबाट पनि साथ र सहयोग पाइरहेका छन्।
‘अस्पताल र सहकर्मीको साथ र सहयोग छ। कुनै प्रकारको विभेद सहकर्मीबाट छैन।’, उनीहरुले भने।
वीरमा १२६ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, उपचारमा समस्या
यता, वीरका १२६ स्टाफमा संक्रमण देखिएको छ। कोभिड युनिफाइड अस्पताल, वीरका उपनिर्देशक एवं छाति रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठले आजसम्म १२६ स्टाफमा संक्रमण देखिएको बताए।
जसमध्ये ३० चिकित्सक, ५८ नर्स र बाँकी ल्याव, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको उनले बताए।
डा.श्रेष्ठले अधिकांश चिकित्सक संक्रमित हुँदा उपचारमा निकै समस्या देखिएको बताए। उनले अस्पतालका नियमित सेवा दिनमा गाह्रो भएको र कोरोना उपचारका लागि मात्र जनशक्ति परिचालन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
डा.श्रेष्ठले संक्रमित स्टाफहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको बताए। उनले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा २३१ बेड रहेको र हालसम्म वीरमा ९२ संक्रमित भर्ना भएको बताए। वीरमा आजका दिनसम्म १६ संक्रमित आइसियुमा र २ जना भेन्टिलेटरमा रहेको उनले बताए।
संक्रमित अधिकांशको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारमा कुनै कुराको अभाव नरहेको उनले सुनाए।
One thought on “संक्रमित ज्यान लिएर वीरमा ‘वीरता’ देखाइरहेका डा. थापा र मेहता”
नेपाली छोरो says:
ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्दा ज्यान गयो भने सेनाको गाडीले प्लास्टिकमा बेरेर लैजाने हो पशुपति। त्यो दिन तपाइँको बारेमा न बिरामीलाइ मतलब हुन्छ, न वीर अस्पताललाइ न सरकारलाइ। तपाइँको नामको कोभिड भत्ता समेत फर्जी कागज बनाएर कोही प्रसासनिक कर्मचारीले खाइदिन्छ। केबल तपाइँको परिवारलाइ मात्र पीडा हुनेछ।